हटमेल प्रयोग गर्नुभएको छ ? अब आउटलुक डट कममा खाता खोल्नुस् | नेपाल इटाली डट कम
हटमेल प्रयोग गर्नुभएको छ ? अब आउटलुक डट कममा खाता खोल्नुस्
August 2, 2012 — nepalitaly
जिमेलको लोकपि्रयता सँगै हटमेल छायाँमा परेपछि माइक्रोसफ्ट कम्पनीले हटमेललाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ इमेल सेवा ल्याएको छ । जिमेललाई टक्कर दिने गरी असिमित डाटा संचिति क्षमताका साथै भिडियो च्याट सेवा स्काइपीको सुविधासहित माइक्रोसफ्टले आउटलुक डट कम नामको इमेल सेवा सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि विन्डोस अपरेटिङ सिस्टम अन्तरगत परम्परागत इमेल सेवाको रुपमा माइक्रोसफ्टलेेे ल्याएको आउटलुक एक्सप्रेसको नामबाटै नयाँ इमेल सेवा सुरु गरिएको हो । आउटलुक एक्सप्रेस डेक्सटप इमेल सेवाको रुपमा विश्वमा सबैभन्दा बढि प्रयोगमा आएको माइक्रोसफ्टको दाबी रहँदै आएको छ ।
माइक्रोसफ्टको विन्डोज लाइभ सेवाका उपाध्यक्ष क्रिस जोन्सका अनुसार आउटलुक डट कम परिक्षण स्वरुपका रुपमा प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध भैसकेको छ । अरु इमेल सेवा भन्दा आउटलुक डट कम निकै उत्कृष्ट भएको दाबी गर्दै उनले यो इमेल सेवाले पहिलोपटक प्रयोगकर्तालाई चाहेको जति डकुमेन्ट आफ्नै अकाउण्टमा संचित गर्ने क्लाउड मेलको उत्कृष्ट रुप प्रदान गरेको बताए । यसले निजि अकाउण्टलाई डाटा सेन्टरको रुपमा विकशित गर्ने उनको दाबी छ ।
अब माइक्रोसफ्टले नयाँ इमेल सेवा सार्वजनिक गरेसँगै हटमेल प्रयोगकर्ता के गर्ने होला ? भन्ने द्धिविधिमा परेका छन् । तर हटमेल तथा माइक्रोसफ्ट लाइभ युजर्सहरुले आफ्नो पूरानै युजर्स नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी आउटलुक डट कममा खाता खोल्न सक्छन् । यसरी आएटलुक डट कममा खोलिएको खातामा पूरानो हटमेलमा रहेका सबै म्यासेज तथा डकुमेन्टहरु यथावत संचित भएका हुनेछन् । तर तत्कालका लागि हटमेल सेवा समेत सुचारु नै हुनेछ । हटमेल प्रयोगकर्ता आउटलुक डट कममा स्थानान्तरण हुन सक्ने र नयाँ अनुभुति लिन सक्ने भन्दै माइक्रोसफ्टले केही समयका लागि हटमेल सेवाबाटै पनि काम चलाउन सकिने बताएको छ । तर केही समयपछि भने हटमेल पूर्ण रुपमा बन्द गरेर आउटलुकमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।
आउटलुक डट कमका प्रयोगकर्ताले इमेल प्रयोगमा नयाँ अनुभुति हाँसिल गर्न सक्ने तथा हटमेलमा जस्तो आफ्नो इमेल पेजमा ठूलो विज्ञापन आउने झण्झट बेहोर्नु नपर्ने बताइएको छ ।
नयाँ प्रयोगकर्ताले आउटलुक डट कममा सजिलैसाग हटमेलमा जस्तै गरी खाता खोल्न सक्छन् र आउटलुक बाटै स्काइपीको सुविधा लिन सक्छन् ।
« NRN Italy 3rd Annual General Meeting 2012 held in Rome